MOV faịlụ bụ QuickTime multimedia usoro. Apple Computer mepụtara ya ọ bụ ezie na ọ na-akwado ma Windows na Macintosh ịwa usoro. Nke a faịlụ Ọkpụkpọ na-eji zọpụta ndị ọzọ ẹdude video faịlụ yana nkiri na a ọrụ media ngwaọrụ. Ka ị na-enuba na Internet ị ga-ahụ na ọtụtụ n'ime video faịlụ ndị na .mov usoro. Nke a na ụdị format akpa bụ mfe ibudata n'agbanyeghị na otu ma ọ bụ karịa data dị ka audio, mmetụta, ma ọ bụ ndepụta okwu video.
Nwere ị gbalịrị akpọ a .mov faịlụ na gị VLC na ọ na-apụghị na-egwu? M n'aka na ị nwere okosobode na ụfọdụ faịlụ. Ka m ndo ụfọdụ ìhè ma ọ bụrụ na ị ka na-na ọchịchịrị ọ bụrụ na gị VLC apụghị egwu dị otú ahụ usoro. Ebe ọ bụ na MOV faịlụ e mepụtara site Apple kọmputa o nwere Ọ mejupụtara Apple ndịna-emeputa codec na-adịghị dakọtara na niile media egwuregwu. E nwere ọnụ ọgụgụ nke ihe ngwọta na-a. Ị nwere ike ma wụnye a mgbasa ozi ọkpụkpọ na bụ dakọtara na a codec ma ọ bụ i nwere ike ị na-eji kediegwu Wondershare ngwa akpọ Wondershare Video Converter Ultimate. Nke a na-ahapụ gị tọghata MOV faịlụ ka a dakọtara format na nke ị nwere ike igwu ya site na Ndenye Time. Ị nwere ike igwu .mov faịlụ site na iji na Mac version ma ọ bụ iji windows version.
Nkebi nke 1: MOV faịlụ na Mac
Part 2: MOV faịlụ na Windows
Ka anyị hụ otú na-egwu MOV faịlụ na Mac iji MOV Ntụgharị N'ihi Mac.
1 Download na wụnye App
Wondershare Video Ultimate Ntụgharị dị online maka download. Ị nwere ike ịzụta ma ọ bụ download free ikpe. Mgbe ahụ malite na gị Mac.
2 Mbubata MOV faịlụ ka App
Mepee software na gị Mac. Mgbe ahụ ịdọrọ chọrọ MOV faịlụ na ị chọrọ na na na ngwa. Ọ ga-apụta dị ka nke a.
3 Play MOV faịlụ
Mgbe dọlite ​​MOV faịlụ, pịa bọtịnụ na n'elu aka ekpe ka na-amalite na-akpọ video. Ọ bụ na mfe.
Nkebi nke 2: MOV faịlụ na Windows
N'ihi na windo ọ bụkwa ole na ole clicks na-egwu MOV faịlụ na kọmputa gị. Soro ndị a mfe nzọụkwụ.
1 Download Wondershare video Ultimate Ntụgharị maka Windows
Nke a software bụkwa dị na ukara Wondershare saịtị. Download free ikpe version ma ọ bụ ịzụta ya na ibudata ya na kọmputa gị. Hụ na ị ebudatara windows version.
2 Open na mbubata MOV faịlụ
Mgbe ọma wụnye ngwa, na-emeghe ya na kọmputa gị. Mgbe ahụ ịdọrọ chọrọ MOV faịlụ ị chọrọ igwu ka software. I nwekwara ike pịa Files> Tinye Files. Ya onye ọrụ interface bụ enyi na enyi na i nwere ike ịhụ na omume.
3 Play MOV faịlụ ozugbo
Mgbe agbakwunye faịlụ ka Wondershare video Ultimate Converte r mkpa ka ị na-egwu ya ozugbo. Ịnyagharịa cursor ka n'elu nri na pịa a ọchịchịrị button na-ahapụ gị-egwu Video. Pịa na ya na-amalite na-akpọ video. Site n'ebe ahụ i nwere ike jirichaa ihuenyo na-enwe mmasị ikiri niile MOV faịlụ na i nwere.
Ị kwesịrị ị na echegbula mgbe unu na-emikpu n'ime a MOV faịlụ ebe ị dị nnọọ mkpa a dị ịtụnanya Wondershare Video Ultimate Ntụgharị.
> Resource> VLC> Gịnị Mere VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ egwu .mov faịlụ?